दुर्लभ घटना: तीन ग्रह र चन्द्रमा एकै रेखामा देखिँदै, यसरी हेर्नुहोस् ! [तरिका सहित] – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दुर्लभ घटना: तीन ग्रह र चन्द्रमा एकै रेखामा देखिँदै, यसरी हेर्नुहोस् ! [तरिका सहित]
एजेन्सी – कोरोना भाइरसका कारण अहिले पूरै विश्व आक्रान्त छ। विश्वका धेरै जस्तो देश अहिले लकडाउनको अवस्थामा छन्। लकडाउनसँगै अहिले संसारभरि प्रदूषणमा धेरै नै कमी आएको छ, आकाश सफा छन् भने हावा पनि सफा छ।यहि सफा मौसम एक दुर्लभ खगोलीय अवस्थाको अवलोकन गर्ने उपयुक्त मौका हुन सक्छ। खुला तथा सफा आकाशका कारण केहि दिन पछि हुने खगोलीय अवस्थाको अवलोकन टेलिस्कोप वा दूरबीन बिना पनि गर्न सकिनेछ।
खगोलविद्हरुका अनुसार बैशाख २, ३ र ४ गतेको बृहस्पति, शनि, मंगल र चन्द्रमा एकै रेखामा देखा पर्नेछन्। यो खगोलीय अवस्था विशेषतः बिहानीपख देखिने खगोलविद्हरुको भनाई छ।३ ग्रह र चन्द्रमा एकै रेखामा देखिने उक्त खगोलीय अवस्था बिना टेलिस्कोप वा दूरबीन ना-ङ्गा आँखाले पनि देख्न सकिनेछ। सूर्य परिक्रमाको क्रममा हाल एक-अर्कासँग नजिक हुँदै गएका यी तीन ग्रह र चन्द्रमा अप्रिलको मध्यमा एकै रेखामा देखा पर्नेछन्। तीन ग्रह एकै रेखामा भएको अवस्थालाई चन्द्रको उपस्थितिले अझ सुन्दर बनाउने छ।
हुन त मार्च महिनाको राति बृहस्पति, शनि र मंगल ग्रह संग-सँगै देखिएका थिए। तर, अप्रिल महिनाको मध्यमा चन्द्रमाले यस अवस्थालाई अझ विशेष बनाउने खगोलविद्हरु बताउँछन्।तीन दिन एकै रेखामा देखिए पश्चात मंगल यी दुई ग्रहबाट टाढा हुनेछ भने यस्तो खगोलीय अवस्था अवलोकन गर्नका लागि केहि वर्ष कुर्नुपर्नेछ। यी ग्रहहरु केहि दिनमै एक-अर्काबाट टाढा हुने र सन् २०२०को मध्य भन्दा अगाडी यस्तो अवस्थामा देखा नपर्ने नासाले जनाएको छ।
कोरोना भाइरसक कारण विश्वभर गरिएको लकडाउनले प्रदुषण घटेको अवस्थामा यस्तो खगोलीय अवस्था अवलोकन गर्नु एक मौका हुन सक्ने बताइन्छ। आकाश धेरैनै सफा रहेको हुँदा यस्तो मौका घरि-घरि नआउने विज्ञहरु बताउँछन्।
गण्डकी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा बन्द
बोक्सीको आरोपमा आफ्नै छोराले लिए आमाको ज्यान
नयाँ संक्रमित चन्द्रगिरीमा, भक्तपुरका संक्रमित हालसालै तराईबाट आइपुगेको खुल्यो !